UShalom ovela kwiZiko leHlabathi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » UShalom ovela kwiZiko leHlabathi
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Culinary • I-Israel Iphula Iindaba • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Novemba 24, 2019
by UGqirha Peter E. Tarlow
Ibhalwe ngu UGqirha Peter E. Tarlow
Kukho intetho kuluncwadi lwakwaMidrashic ethi uThixo walinika ihlabathi imilinganiselo elishumi yobuhle, abasithoba baya eYerusalem enye yaya kwihlabathi liphela. Nangona le ntetho isenokuba kukuzibaxa okuncinci, ngaphandle kwamathandabuzo ukuba ikomkhulu lakwa-Israyeli sesinye sezona zixeko zihle emhlabeni.
Sifikile eTel Aviv ukusuka eNewark emva kwendiza ende kwaye ingahlali iphumle. Ukusuka eTel Aviv, saya eJerusalem. UTel Aviv mncinci, ushushu, uyadlamka, kwaye uhlala engxamile. IYerusalem iyacinga, ingokomoya, urhulumente kunye nembali. Xa zizonke ezi zixeko zibonisa amacala amabini obomi.
Olu hambo lumalunga nenkcubeko. Ndilapha kunye neLatino-iqela lamaJuda elinobudlelwane. Ukuthathela ingqalelo ukuba inkwenkwezi yebhola ekhatywayo enkulu yaseArgentina uLionel Messi ulapha ixesha ligqibelele.
Ngokweentsomi ezininzi zaseNtshona, ezobuKristu nezamaJuda, iJerusalem sisazulu sehlabathi. Ilitye lesiseko kwiNtaba yeTempile liqwalaselwa ngamaJuda, ngamaKristu, nangamaSilamsi. ukusukela kweli nqanaba kulinganiswa yonke imigama. Ngelixa ingxelo enjalo isenokungabonakalisi ubume bejografi, inkitha yeendwendwe ezivela kwihlabathi liphela, inyani yokuba kwihektare enye yomhlaba sifumana iWall Wall, iCurch yeSingcwaba eliNgcwele, kunye neDome of the Rock zenza le ndawo mhlawumbi eyona ndawo ingcwele eMhlabeni. Ukuva ukudityaniswa kwezandi zobizo lwamaSilamsi emthandazweni, ukukhala kweentsimbi zeCawa, kunye nezandi zokwenza umthandazo (umthandazo wamaJuda) ukuxubana kunye nezinye kunika ithemba lokuba abantu banokuvana kwaye ekugqibeleni senziwe sonke ngokomfanekiso we-Gd. Alithandabuzeki elokuba iYerusalem iyachuma. Izolo ebusuku sigqibe isidlo sangokuhlwa malunga ne-11: 00 ngokuhlwa, iivenkile zokutyela bezizele kwaye ngaphandle kobusuku obubandayo, izitalato bezizele
Iinqaba ezijikeleze iYerusalem
Izolo sithathe abathathi-nxaxheba kwiziko lobuDlelwane bamaLatino-bamaJuda kukhenketho lwenkolo kwiSixeko esiDala (העיר העתיקה). Uninzi lwezakhiwo lususela kuKumkani uHezekiya ekuthethwa ngaye eBhayibhileni, owayelawula kwa-Israyeli kwiminyaka engamawaka amathathu eyadlulayo. (Jonga iNcwadi yooKumkani). IJerusalem sisixeko sabaprofeti bakwaSirayeli kunye nendawo apho amaKristu achitha khona iintsuku zakhe zokugqibela. Sisixeko esineendawo zokuhlala ezinxityelelaniswe ngokuxakekileyo, isixeko esiphilayo apho amaJuda, amaSilamsi, kunye namaKristu bethandaza, behlala khona, kwaye besebenza kunye-ilabhoratri kunye nokuhlalisana phakathi kwabantu kunye nenkcubeko.
Ukumbiwa kwezinto zakudala zamasiko obuYuda (mikvehs) ukusuka kumaxesha ok uKumkani uHezekiya wenkulungwane ye-8th BCE)
Imithandazo yoDonga lwaseNtshona lelona xesha likhethekileyo kubantu abaninzi. Kukho intetho ngesiHebhere ethi kukho abantu abanentliziyo yelitye kwaye kukho amatye achukumisa intliziyo yomntu (יש אבנים עם לב של אבן ויש אבנים עם לב אדם)
Amatye esigebenga ngawokugqibela, amatye achukumisa intliziyo yomntu, kwaye abantu beza bevela kuzo zonke iimbombo zehlabathi ukuza kuthetha kunye namandla aphezulu kunalawo abantu abafayo.
Ukubakho, kunye nokujikeleza, udonga lwaseNtshona kunye nokufunda imikrolo yamatye ukusuka kwiminyaka engamawaka amathathu eyadlulayo ebhalwe ngesiHebhere esilula idibanisa umJuda wanamhlanje nookhokho bakhe noomawokhulu ukusuka kwiminyaka emithathu eyadlulayo. La matye amandulo asebenza njengamangqina kubunzulu bembali yamaJuda. Zime njengezikhumbuzo ezingathethiyo zokuba iYerusalem ayisiyongomkhulu nje yakutshanje yakwaSirayeli kodwa sele injalo ngaphezu kweminyaka engamawaka amathathu. Basikhumbuza ukuba iYerusalem ayikho enye idolophu eMhlabeni.
Ndinqwenela umntu ngamnye kuni: U-Shalom ovela eYerusalem, umbindi wehlabathi.
Umthandazo eKotel (eNtshona Wall)
UGqirha Peter E. Tarlow
Ugqirha Peter E. Tarlow sisithethi esidume kwihlabathi liphela kunye nengcali egxile kwimpembelelo yolwaphulo-mthetho nobunqolobi kwicandelo lezokhenketho, imicimbi kunye nolawulo lomngcipheko wokhenketho, kunye nokhenketho nophuhliso lwezoqoqosho. Ukusukela ngo-1990, uTarlow ebencedisa uluntu kwezokhenketho ngemiba enjengokhuselo lokuhamba nokhuselo, uphuhliso lwezoqoqosho, intengiso yoyilo kunye nengcinga yoyilo.
Njengombhali owaziwayo kwicandelo lokhuseleko lwezokhenketho, uTarlow ngumbhali onegalelo kwiincwadi ezininzi kwezokhuseleko lwezokhenketho, kwaye upapasha amanqaku amaninzi emfundo kunye nokusetyenziswa kophando ngokubhekisele kwimicimbi yezokhuseleko kubandakanya amanqaku apapashwe kwiThe futurist, Ijenali yoPhando loKhenketho kunye Ulawulo loKhuseleko. Uluhlu olubanzi lweTarlow yamanqaku obuchwephesha kunye nabaphengululi kubandakanya amanqaku ngezihloko ezinje: UTarlow ukwabhala kwaye apapashe incwadana yeendaba yezokhenketho ekwi-intanethi efundwa ngamawakawaka ezokhenketho kunye nabakhweli bezohambo kwihlabathi liphela ngolwimi lwesiNgesi, iSpanish, kunye nesiPhuthukezi.